🥇 ▷ Labadan su’aal ee la isweydiin karo waxaa lagu soo bandhigi doonaa Daabaca sharafta leh ee 'Honor Play Edition' ✅
Labadan su’aal ee la isweydiin karo waxaa lagu soo bandhigi doonaa Daabaca sharafta leh ee ‘Honor Play Edition’
Daabacaadan qaaska ah waxaa lagu iibin doonaa Shiinaha laga bilaabo 1da Agoosto.
Daacadnimo Ciyaar, ee duruufahayaga fog, ayaa caan ku ah noqoshada taleefanka casriga ee ugu horreeya ee lagu faano GPU Turbo, aalad ay soo saartay Huawei / maamuus awood u leh kordhinta waxqabadka garaafyada 60% isla mar ahaantaana yareynaysa isticmaalka 30%, Thanks to isku darka gaarka ah ee qalabka iyo software. Si kastaba ha noqotee, qaabkan ayaan wali soo gelin suuqyadeena (inkasta oo ay dhowaan dhici karto), sidaas darteed waxay halis ugu jirtaa inay lumi doonaan kooxda weyn ee soo saarta taleefannada gacanta. Cusub Daabacaadda Gaarka ah si kastaba ha noqotee waxay ka caawin kartaa isaga inuu noqdo xusuus badan.
The gaar ah farsamooyinka qalabku way sii jiri doonaan is beddelin, markaa aan wali ka hadalno waxyaabaha ka soo baxa 6.3 ″ buuxa HD + (1,080 x 2,340 pixels 19.5: 9 leh feejignaan), SoC Kirin 970, 4/6 GB oo RAM ah, 64 GB oo ah xasuusta gudaha, laba kamaradaha gadaal ah (16 + 2 megapixels) iyo batteriga ka 3,750 mAh. Halkii, way is bedeli doontaa muuqaalka, gaar ahaan daboolka dambe. Nafsaddaada u xukumaan si aad u fiicnaato ama uga xun.
AKHRISO: Mudane 10, dib u eegista
Daabacaadan qaaska ah, Maamuusta ayaa dooratay mid processing laser si loo muujiyo khaas ah dusha birta shirqool mustaqbal wanaagsan, waxaa dhiirrigaliyay wareegyada elektiroonigga ah. Midabada la heli karo waxay noqon doonaan labo, taasi waa Enchanting Red waa Habeen sixir Madoow, halka sicirka loo qorsheeyay inuu kor ugu kaco 2,499 yuan (qiyaastii € 315 heerka sarrifka hadda). Sida nooca caadiga ah, helitaankiisa ayaa hadda laga heli karaa Shiinaha oo keliya, laga bilaabo 1-da Agoosto.